Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 9)
IOttie waxay ku sharraxeysaa fiilooyinka wireless-ka gees kasta
iOttie waxay soo bandhigtay moodooyin kala duwan oo ah fiilooyinka wireless-ka inta lagu gudajiray CES-ga Las Vegas, oo leh qaabab iyo xalal xiiso badan
Xogta caafimaadka waxay u adeegtaa caddeyn u ah xadgudubka
Xogta lagu soo aruuriyay barnaamijka caafimaadka ee iPhone-ka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xukumo kufsi la sheegay in uu ku sugan yahay Jarmalka ka dib markii booliisku jabsaday boosteejada.
Dhammaan maahan fiilooyinka wireless-ka waa kuwo fool xun oo iOttie's waa tusaale
Shirkadda iOttie waxay soo bandhigtay macruufka 'Wireless Wireless Fast Charging Pad', xeedho wireless ah oo leh dhar dhammaad ah oo lagu heli karo 5 midab, taas oo na siisa naqshad ka duwan tan aan inta badan ka helno badeecadan oo kale.
IPhone-kaaga ayaa haysa rikoor dhameystiran dhammaan meelaha aad booqato
IPhone waa sanduuq layaab leh. Ma ogtahay inaad ka heli karto diiwaanka meelaha dhowaan la booqday iPhone-kaaga. Waan kuu sharraxeynaa
Satechi wuxuu soo bandhigayaa xeedho safarkiisu yahay 75w USB-C oo leh 4 dekadood
Satechi waxay soo saartay aalad cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala ee noloshooda ku bixiya safarka: Charger Travel, xeedho safar oo leh hal dekedo USB-C, laba dekedo ah USB 3.0 iyo dekedda Qualcomm Quick Charge.
LaCie DJI Copilot, wadid adag oo dibedda ah oo loogu talagalay iPhone ama iPad
Ma u baahan tahay wadid adag oo dibadda ah oo loogu talagalay iPhone ama iPad? Ma u baahan tahay inaad yeelato awood badan? LaCie DJI Copilot wuxuu noqon karaa bedel
Nokia Sleep waa beddelka shirkadda Finnishka ee beddit-ka Apple si loola socdo hurdada
Nokia Sleep waa koox ku dhexjirta furaashka taas oo noo ogolaaneysa inaan la soconno dhaqdhaqaaqa jiifka, na siinaya dhibco sida ay tahay saacadaha iyo waqtiga nasashada qoto dheer
Batariga kale ayaa ku gubanaya Bakhaarka Apple ee magaalada Valencia
Baytariyada gubanaya iyo Dukaanka Apple ee ku yaal magaalada Valencia ayaa mar kale jilayaal ka ah muddo gaaban. Dhowr saac ka hor…
D-Link ayaa ku sharxi doona Mesh WiFi iyo fiilooyin casri ah CES 2018
D-Link wuxuu na tusayaa warkiisa CES ee Las Vegas oo ay ku jiraan router cusub oo leh WiFi AX, shabakadaha mesh iyo fiilooyinka smart
Satechi wuxuu soo bandhigayaa saldhig laba geesood ah oo loogu talagalay iPhone iyo Apple Watch
Shirkadda Satechi waxay hadda ku soo bandhigtay CES saldhig laba geesood ah, kaas oo noo oggolaanaya inaan wada qaadno labada iPhone iyo Apple Watch.
Qalabka Netgear Arlo Baby wuxuu la jaan qaadayaa Apple HomeKit
Netgear sidoo kale waxay isticmaashaa Apple HomeKit si ay alaabteeda uga dhigto mid soo jiidasho leh adeegsadaha. Oo hadda Kaamirada Carruurta Carlo ayaa la jaan qaadi doonta
Hal-abuurnimadu waxay ku dhawaaqeysaa af-hayeenkeeda caqliga badan iyo waxyaalaha kale ee soo ifbaxaya CES 2018
Hal abuurka wuxuu soo bandhigayaa Afhayeenka cusub ee WiFi oo leh Alexa, Laba Nooc oo Khariidad ah oo Khariidaysan oo la cusbooneysiiyay, iyo Dhagaha dhageysiga ee CES 2018
Canary wuxuu ku dhawaaqayaa Kaamiro cusub oo la awoodi karo iyo iswaafajinta Alexa
Canary ayaa ina tusaya barnaamijkeeda cusub ee loogu talagalay kamaradaha ilaalada iyo nooc cusub oo aad u jaban, Canary View.
WeMo Bridge, kuna darida iswaafajinta Apple HomeKit
Belkin wuxuu ku darayaa taageerada borotokoolka 'Apple HomeKit' iyada oo loo marayo qalab cusub oo ah inuu masruufay WeMo Bridge
DJI wuxuu bilaabayaa OSMO MOBILE 2, gimbalkiisa cusub ee la hagaajiyay qiimo ka hooseeya
Ragga ku jira DJI waxay hagaajinayaan gimbalkooda aaladaha mobilada iyagoo bilaabaya DJI OSMO MOBILE 2, iPhone gimbal cusub oo qiimahiisa hoos u dhigaya marka loo eego noocii hore
Khiyaanooyinka Safari si aad u dhakhso badan u socoto
Waxaan ku siineynaa talooyin si aad uga faa'iideysato Safari ugana dhigto mid aad u dhaqso badan
Sida loo arko furahaaga sirta ah ee ku kaydsan iPhone
Waxaan ku bari doonnaa sida loo arko loona maareeyo dhammaan lambarkaaga sirta ah si toos ah iphone-kaaga ama iPad-ka markii loo baahdo.
Apple waxay diyaarisaa barnaamij cusub oo ay la socoto Octavia Spencer oo ah jilaa
Markay u socoto si ay u soo saarto meel ka mid ah adduunka qulqulka fiidiyowga, Apple waxay diyaarinaysaa Ma Huruddaa, barnaamij cusub oo ay la socoto Octavia Spencer oo ay soo saartay Reese Witherspoon.
Iyada oo leh Tim Cook waxaa jira laba jeer dib u dhaca marka loo eego Steve Jobs
Apple, dib u dhacyadu waxay noqonayaan kuwo caadi ah, tanina waxaa shaaca ka qaaday maqaal ka soo baxay WSJ oo bixiya xog aad u xiiso badan.
Xirmooyinka wireless-ka ayaa dhammaantood ah ciil: Belkin wuxuu soo bandhigayaa sheekooyinkiisa cusub ee 2018
Belkin waxay soo bandhigtay aaladaha cusub ee lagu soo rogay wireless iyagoo bilaabaya sanadkan 2018, waxayna kufiicanyihiin iPhone 8, 8 Plus iyo X
Sida looga hortago iPhone inuu ku xirmo shabakad Wi-Fi kaydsan
Waxaan ku bari doonnaa sida looga hortago iPhone-ka inuu ku xirnaado shabakad Wi-Fi ah oo keydsan sidaa darteed adiga oo aan iloobin lambarka sirta ah waa inaad iskood ugu xirtaa.
Mophie wuxuu soo bandhigayaa batari 22.000 mAh oo banaanka ah kaas oo aan ku qaadi karno MacBook, iPhone, iPad ...
Thanks to Mophie ee weyn ee 22.000 mAh baytariga dibedda, waxaan ka qaadi karnaa MacBook-ga ama laptop-ka meel kasta oo aan joogno haddii aan haysanno koronto.
Apple waxay joojineysaa iibinta 16 milyan oo iphone sababo la xiriira barnaamijka badalashada batteriga
Barnaamijka beddelka batteriga ee iPhone 6 wixii ka dambeeya wuxuu arki doonaa shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino inay joojiso iibinta illaa 16 milyan oo iphone sannadkan.
Satechi waxay na siisaa sicir qiimo jaban oo lacag la'aan ah
Satechi wuxuu na siiyaa saldhig lacag la aan ah oo lacag lagu rakibo oo leh naqshad wanaagsan iyo qalabka heerka koowaad sida aluminium. Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa lacagta degdegga ah ee iPhone X, 8 iyo 8 Plus.
Sida loo xiro barnaamijyada kujira iPhone X
IPhone X wuxuu soo bandhigayaa tilmaamo cusub oo loogu talagalay shaqooyinka badan iyo xirida codsiyada. Waxaan kuu sheegeynaa sida ay u shaqeyso iyo sida aan ugu adeegsaneyno hagaajinta waxqabadka qalabkeena.
Avido WiBa, xeedho kale oo wireless ah oo aad ku isticmaasho iPhone X
Avido WiBa waa xeedho leh tiknoolajiyada Qi oo kuu oggolaan doonta inaad ka qaadatid iPhone X-gaaga meel kasta oo aanad u baahnayn fur
Sida loo hubiyo xaaladda dammaanadda ee iPhone
Waxaan ku baraynaa sida loo ogaado heerka dammaanad qaadka ee iPhone ama shey kale oo iPhone ah talaabooyin fudud oo fudud.
Survivor Royale, oo ah qaab PUBG oo dhan oo looga soo horjeedo dhammaan macruufka
Badbaadiyaha Royale, kulankaan loogu talagalay macruufka waa nooc guul ah oo PUBG ah iyo in mudnaantiisa gaarka ah ay u noqoneyso jaangooyo macruufka App Store.
IPhone-kaaga ma gaabis yahay? Tabaha ugu fiican ee lagu hagaajiyo waxqabadka
Waxaan ku baran doonaa tabo yar oo fudud oo fudud oo si weyn kor ugu qaadaya waxqabadka iPhone-kaaga si aadan u badalin batariga
Sida loo maareeyo dhammaan qalabka loo qoondeeyey Apple ID-gaaga
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida aad u maamuli karto Aqoonsigaaga Apple iyo sidoo kale aaladaha loo qoondeeyay ee talaabooyin yar oo fudud ah oo ka dhigi doona howshan sida ugu fudud ee suurtogalka ah
HTC, Motorola, LG, iyo Samsung waxay sheeganayaan inaysan yareynin waxqabadka aaladaha leh baytariyadii hore
Ka dib muranka ka taagan aaladaha wata baytariyadii hore ee Apple, HTC Motorola, LG, iyo Samsung, waxay diidayaan hoos u dhaca ku yimid waxqabadka qalabkooda.
Maxaan ka filan karnaa Apple sanadka 2018
Waxaan soo koobeynaa waxa hubaal ah inaan arki doonno 2018 iyo waxa aan arki karno iyadoo loo eegayo xanta ku saabsan bilaabista cusub ee Apple
Sida Loogu Soo Dejiyo Sawirrada iPhone-ka Loogu Wareejiyo Hard Drive-ka Dibadda Adoo Isticmaalaya Mac
Ma rabtaa inaad ka soo dhoofsadaan sawiro ka iPhone in drive dibadda adag? Waxaan ku sharaxeynaa qaab fudud sida loo sameeyo haddii aad heysato kumbuyuutar Apple ah
Apple horeyba waxay u bilaabatay inay bixiso beddelka batteriga ee € 29
Ka dib markii uu ku dhawaaqay taariikhda dhamaadka bisha Janaayo bilowga beddelka batteriga ee $ 29, Apple ayaa hagaajinaya oo xaqiijineysa inay hadda tahay.
Haa, IPhone wuxuu ahaa badeecada ugu iibinta badan tikniyoolajiyadda 2017
Dhowr falanqeeye ayaa xaqiijinaya in iPhone uu ahaan lahaa badeecada ugu iibinta badan tikniyoolajiyadda intii lagu guda jiray 2017 iyadoo la iibiyay ilaa 223 milyan oo unug, waxaa ku xigay Samsung Galaxy S8.
Sida looga saxeexo dukumenti ka socda iPhone ama iPad adoo adeegsanaya Boosta
Ka soo saxeexida iPhone ama iPad waa wax aad u fudud haddii aad ka hesho dukumiinti PDF ah barnaamijka IOS "Mail". Halkan waxaan kuugu sharxi doonaa sida loo sameeyo
Khilaafka batteriga iPhone: aan wax ka nadiifino
Waxaan horeyba ugu jirnay muran muddo toddobaadyo ah oo ku saabsan sida Apple u sameyso aalado batterigooda xumaaday iyo hadda ...
Canary, dhammaan waa hal kamarad amniga ah
Canary wuxuu na siiyaa kamarad ilaalin leh heerkulka, huurka iyo dareemayaasha tayada hawada oo waliba isku daraya seeriga ilaa 90 decibel
Muranku wuu sii socdaa, Kuuriya waxay dalbanayaan sharaxaad ku saabsan gaabiska iPhone-ka
Waxaan u adeegaynay muranka dhowr toddobaad, si gaar ah tan iyo markii Apple go'aansaday inuu runta ka dhigo runta, way gaabineysaa ...
Sida loo qaado shaashadda iPhone X
Tutorial si aad ugu qaadatid shaashadda iPhone X. Buug fudud oo talaabo-tallaabo ah oo lagu fulinayo shaqadan fudud laakiin muhiim ah. Waxaan sidoo kale ku baraynaa sida loo saxo shaashadda, sida loola wadaago iyo waxyaabo kale. Haddii aadan aqoon sida loo qaado shaashadda iPhone X, halkan waxaan ku tusaynaa sida !!
Sanadka labaad ee isku xigxiga, iPhone-ka ayaa ugu sarreeya liiska howlaha Mareykanka
Sannad kale, IPhone-ka ayaa markale hoggaaminaya kala-sarreynta aaladaha la hawlgeliyey xilligii Kirismaska ​​ee Maraykanka
La wadaag erayga sirta ah ee Wi-Fi isla markiiba, muuqaal cusub oo ku saabsan iOS 11
Apple waxay qorsheysay iOS 11 nidaam noo ogolaanaya inaan si toos ah ula wadaagno asxaabta asxaabtaada Wi-Fi, sidan ayaa loo adeegsadaa.
Sida loo kiciyo digniinta xaaladaha taraafikada ee iOS
Waxaan ku baraynaa sida loo kiciyo meelaha soo noqnoqda iyo digniinta xaalada taraafikada ee iOS si markasta laguu sheego.
Sida si fudud loogu iibsado kaararka iTunes ama Apple Music
Hadda waxaan diiradda saari doonnaa waxa muhiimka ah, sida aad si fudud ugu soo iibsan karto Apple Music ama kaararka iTunes si aad uga faa'iideysato.
NOCABLE, oo ah saldhig lacag la'aan ah oo lagu dalaco iPhone 8 iyo iPhone X
NOCABLE waa xeedho wireless cusub oo ku shaqeyn kara iPhone 8 iyo iPhone X. Waxay si fiican ugu habboon tahay jeebka surwaalkaaga
Sida loo soo dejisto barnaamijyada iPhone X
Soo ogow sida loo soo dejisto oo loo iibsado codsiyada iPhone X. Maqnaanshaha badhanka guriga ee cusub ee iPhone X, codsiyada dib dambe looma soo dejin sidii hore. Soo hel faahfaahinta oo dhan!
Ciyaaraha IPhone ee kaa dhigi doona ubaxyadaadu inay ubaxdo
Ma rabtaa xulasho ka mid ah ciyaaraha gadaal u dhaca iPhone-kaaga? Halkan waxaan ku siineynaa 5 beddel si aad ugu soo celiso noloshaydii 80s iyo 90s
Samsung waxay isu diyaarineysaa inay sameyso 200 milyan oo OLED ah oo jilicsan oo IPhones cusub ah
Warbixinno dhowr ah ayaa soo jeedinaya in Samsung ay qorsheyneyso in ay sameyso wax ka badan 200 milyan oo ah OLED shaashadda iPhones sanadka 2018.
3 siyaabood oo lagu hubiyo xaalada batteriga ee iPhone-kaaga
Ma rabtaa inaad ogaato waa maxay xaaladda batteriga iPhone? Waxaan ku siineynaa seddex qaab oo aad iskaga hubin karto gurigaaga
Shixnadaha IPhone X ayaa hoos uga dhici doona sidii la filayay Mareykanka intii lagu jiray Q1 2018
Qaar ka mid ah warbixinnada shirkadaha mas'uulka ka ah isku-darka qaybaha iPhone X cusub, ayaa ka muuqda warbixinta DigiTimens ee ...
Amazon waxay siisaa 2 bilood oo bilaash ah oo ah adeegga muusigga qulqulka ah ee qaabkeeda qoys
Amazon waxay na siisaa laba bilood qorshaheeda qoys ee Amazon Music Unlimited, laakiin kaliya 4000 ee macaamiisha ugu horeysa.
Kaamirada, shaashadda OLED iyo Aqoonsiga Face waa waxa dadka isticmaala iPhone X cusub ay aad u qiimeeyaan
Warbixin dhowaan ay soo saartay Strategy Analytics waxay muujineysaa in kuwa loo yaqaan "kuwa hore u korsada" ee iPhone X, taas oo ah, dadka isticmaala ...
Apple Park Ayaa Lagu Muujiyay Ku Dhawaan Dhamaystirka Fiidiyowgii Ugu Dambeeyay ee Drones
Qofna ma dhihi karo ma garanayo sida shaqooyinka Apple Park ay hadda u socdaan waana ...
Shazam wuxuu ku darayaa qaab cusub oo qadla'aan ah cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay
Toddobaad ka dib markii lagu dhawaaqay iibsiga Shazam ee Apple, dalabku wuxuu hadda helay cusbooneysiin cusub oo ku daraya qaab offline ah
Sida laga soo xigtay KGI, Apple wuxuu bilaabi doonaa 'waxtar' AirPods qeybta labaad ee 2018
Waxaa jira xan badan oo ka digaya imaatinka AirPods cusub sanadkaan aakhirkiina ay ku sii nagaadeen ...
Saurik wuxuu xaqiijinayaa inuu ka shaqeynayo bixinta taageerada Cydia ee iOS 11
In kasta oo dhowaan la waayey laba ka mid ah keydadkii ugu muhiimsanaa ee Cydia, Saurik wuxuu ku andacooday inuu sii wado shaqadiisa maxaa yeelay wuxuu aaminsan yahay mashruuca
Badhanka Satechi Bluetooth Media, xakamee muusigaaga iPhone-ka ah gaariga adigoon ku mashquulin
In kasta oo ay xilligan jiraan noocyo badan oo gawaari ah oo noo oggolaanaya inaan xakameyno xuduudaha moobiilkeena mahadnaqa Apple CarPlay ...
Isgoyska Xayawaanka: Cusbooneysiinta Xerada Jeebka Ku Darsashada Mawduucyada Cusub iyo Astaamaha Bulshada
Cusboonaysiinta ugu horreysa ee Isgoyska Xayawaanka: Xerada Jeebka hadda waa la heli karaa waxayna na siinaysaa xaalad cusub iyo sidoo kale shaqooyin cusub oo bulsheed.
Apple ayaa kor u qaaday qiimaha IPhone-ka Hindiya
Apple waxay dooratay inay sare u qaado qiimaha dhamaan noocyada iPhone-ka eek u sugan India, marka laga reebo iPhone SE-da dalka laga sameeyay.
musiXmatch wuxuu siinayaa isbedel xagjir ah adeegsigiisa adeegsigiisa
Cusboonaysiinta ama dhinta waxay ahayd inay ka fekeraan xafiisyada musiXmatch, waana in nooca 7.0 ay sameeyeen isbeddel xag-jir ah.
Amazon Prime Video wuxuu jebiyaa diiwaanka soo dejinta ee tvOS
Tani waa sida Amazon Prime Video ay ugu guuleysatay inay jabiso dhammaan rikoodhada soo degsashada hore ee tvOS App Store.
Hagaha hadiyadaha kirismaska: xulashadeenu ma ahan inay guul darreysato
Xulista hadiyadaha Kirismaska ​​2021-ka oo aadan ku dhici doonin. Waxaa jira noocyo kala duwan oo badeecooyin iyo fikrado ah in la bixiyo xilliga Kirismaska ​​nooc kasta oo qiimayaal ah.
Dukaanka cusub ee Apple ee ku yaal Vienna, wuxuu ku dhow yahay inuu dhammeeyo shaqooyinka
Shaqada Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Austria ayaa gabagabo ku dhow waxaana laga furayaa Vienna horraanta sanadka soo socda.
Sidee dib loogula soo noqdaa furaha furaha 4-lambar ee iPhone-kaaga ama iPad-kaaga
6-godkaaga iPhone-ka ah ma furayaa PIN wax xanaaq badan? Ma rabtaa inaad dib ugu laabato furaha furaha 4-lambar? Halkan waxaan kuu sheegeynaa sida loo sameeyo
D-Link waxay soo bandhigeysaa kaamirooyinka ilaalada yar yar ee cusub
D-Link wuxuu soo bandhigayaa kamarado yaryar oo cusub oo u taagan cabirkooda yar laakiin leh astaamo wanaagsan iyo barnaamij iPhone ah oo lagu xakameeyo
Canary waxay ku dari doontaa dadka ogaanshaha kamaradaha amniga
Canary waxay ku dhawaaqday wax-ku-darin kaamerooyinka amniga ee imaan doona horaanta 2018, sida dadka lagu ogaado.
Sida si otomaatig ah looga tirtiro barnaamijyada aadan u isticmaalin iPhone ama iPad
Miyaad ka mid tahay kuwa ku rakibaya barnaamijyada sida waalan kadibna la illaaway? Hagaag, udhaqaaji hawsha si otomaatig ah u tirtir barnaamijyada aadan u adeegsanin macruufka 11
Sida loo kiciyo qaabka weyneynta ee iOS 11 iyo waxa loogu talagalay
Xaqiiqdii waad horayba u ogayd shaqadan haddii aad tahay halyeey isticmaalaha macruufka iyo tan iyo markii uu yimid ...
Podcasts ugu dambeyntii waxay leeyihiin qalab lagu falanqeeyo dhagaystayaasha rasmiga ah ee Apple
Tanina waa wax horey loogu dhawaaqay WWDC-da ugu dambeysa bisha Juun, iyo hadda ...
Twitterrific ayaa loo cusbooneysiiyey inuu la jaan qaadayo iPhone X wuxuuna ku darayaa mawduuc mugdi ah
Codsigii ugu dambeeyay ee hadda la cusbooneysiiyay si buuxda ula jaanqaadi kara iPhone X, waa macmiilka Twitter ee Twiterrific
Nintendo wuxuu Kordhiyaa Raadinta Loogu Talagalay Horumariyayaasheeda Ciyaaraha Taleefoonada
Warbixinadii ugu dambeeyay ee la dusiyay ee shabaqa uu daadiyay Wall Street Journal waxay ka hadlayaan kororka raadinta ...
Neato waxay cusbooneysiisaa codsigeeda iyo aalado ay la socdaan astaamo horumarsan
Neato waxay cusbooneysiisaa codsigeeda iyo D3 iyo D5 aalado isku xiran oo hadda na siiya khariidadda nadiifinta iyo tirakoobka barnaamij kasta.
iPhone 8 iyo iPhone X oo ka mid ah ereyada loogu raadinta badnaa Google sanadkii 2017
Sannadka labaad ee isku xigta, iPhone waa mar kale mid ka mid ah ereyada loogu raadinta badan yahay Google, ka hor tartanka
Ku qari "notch" ka iPhone X sawiradaas cusub
Markii aan ka hadlayno Apple "notch", waxaa jira isticmaaleyaal badan oo aan gebi ahaanba ku qanacsanayn bilicdeeda iyo ...
Dhaqaaq tirtirka otomaatiga ah si aad u tirtirto barnaamijyada aadan adeegsan
Waxaan baran doonnaa sida aan ugu hawlgelin karno ka saarista barnaamijka otomaatiga ah casharkaan fudud ee iOS 11.
Sida hoos loogu dhigo macruufka 11.2 ilaa 11.1.2 iyadoon lumin xogta
Marka waxaan ku tusineynaa sida aad u soo dejisan karto nooca iOS ka ah iOS 11.2 ilaa 11.1.2 adigoon lumin xogta.
Waxaan tijaabinay dhagaha Dotts Vantablack, tayada iyo qiimaha saamiga wanaagsan
Waxaan dib u eegnay dhagaha Dotts Vantablack, gabi ahaanba wireless iyo qiime aad u cajaa'ib leh oo waliba ujeeda ujeedadooda
Kuwani waa saddexda ogeysiis ee cusub ee Apple oo muujinaya astaamaha iPhone X
Markasta oo cusub oo la soo bandhigo, gaar ahaan ta iPhone, ragga ka socda Cupertino waxay bilaabaan mashiinada xayeysiinta iyo ...
IPhone gaabis ah? Beddelidda batteriga ayaa hagaajin kara
Apple waxay si ula kac ah uga gaabinaysaa iphone-ka laba sano ama ka badan oo ay la socoto baytari hoos u dhacay si ay ismaamulkoodu u weynaado
La xaqiijiyay: Apple waxay iibsatay Shazam
Apple waxay xaqiijineysaa iibsiga arjiga aqoonsiga muusigga Shazam lacag aan la xaqiijin laakiin taasi waxay ku dhowdahay $ 400 milyan.
Houdini, waxa ugu dhow ee Jailbreak loogu talagalay iOS 10.x
Jailbreak waa soo laabaneynaa waxaan soo bandhigeynaa Houdini, waxa ugu dhow ee Jailbreak ee aad ka heli doontid nooca iOS-ka, aan ogaano.
AirPod-yadaadu kama gudbayaan 99% lacag? Sidan ayaa lagu xaliyaa
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay soo sheegeen in batteriga ku jira sanduuqa AirPods uusan ka badnayn 99%, maanta waxaan ku tusinaynaa sida loo xaliyo dhibaatadan yar.
VLC video player wuxuu hadda taageeraa iPhone X iyo qaabka HEVC ee iOS 11
Ciyaaryahanka VLC ee macruufka ayaa hadda la cusbooneysiiyay si uu ula jaan qaado iPhone X iyo fiidiyowyo tayo leh oo 4K ah oo qaab HEVC ah
Apple way iibsan kartaa Shazam iyo nidaamkeeda aqoonsiga muusikada
Apple waxay ku iibsan kartaa Shazam maalmaha soo socda qaddarka aan la tixgelin karin ee 400 milyan oo doolar, waana lagu dhawaaqi karaa maalmaha soo socda.
Jony Ive ayaa dib ugu soo noqday gacan ku haynta naqshadeynta Apple
Jony Ive wuxuu mar kale si toos ah mas'uul uga yahay naqshadeynta Apple ka dib laba sano oo loogu talagalay dhismaha xerada Apple
Telegram waxaa lagu casriyeeyay warar fara badan
Mar labaad ragga ka socda Telegram waxay sii daayeen cusbooneysiin cusub oo ay ku darayaan shaqooyin cusub iyo hagaajinta dalabka.
iTunes 12.7.2 hadda waxaa lagu heli karaa horumarinno waxqabadyo kala duwan
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee iTunes kaliya waxay na siisaa hagaajinta waxqabadka arjiga iyo xalka cayayaanka yar yar ee la ogaado.
Adeegga qulqulka muusikada Tidal wuxuu hadda taageeraa CarPlay
Codsigii ugu dambeeyay ee la cusbooneysiiyay si loogu waafajiyo CarPlay, Tidal, adeegga qulqulka muusikada ee heesaha.
Ikea wuxuu ka helay Sonos xulafada ugu fiican si kor loogu qaado muusikada iyo codka guriga
Waana waqtiyadii dambe Ikea inay warar u tahay waxyaabo badan waxaana ka mid ah imaatinka dalab kaas oo ...
Moon, oo ah kamarad ilaalin ah oo soo saarta
Moon by 1-Ring waa kamarad cusub oo leh nidaam wareeg ah oo 360º ah oo ka faa iidaysanaysa saldhigeeda isla markaana la midoobaysa HomeKit, Google Home iyo Amazon Alexa.
Bento Stack, oo ah kiis ku xiran Apple oo ku saleysan sanduuqyada qadada ee Japan
Ma ku sidataa qalab badan oo Apple ah adiguna ma jeclaan lahayd inaad sii abaabusho? Bal u fiirso kiiska Bento Stack oo ku saleysan sanduuqyada qadada ee Jabbaan
Isbarbardhiga hababka ugu dhaqsaha badan ee lagu soo dallaco iPhone-ka
Haddii aadan weli hubin kan ugu fiican xeedho ee aad ugu adeegsan karto amarka degdegga ah iPhone X, halkan waxaan ku caddeynaynaa shakigaaga
Sandisk iXpand ayaa keyd ka dhigeysa inta iPhone-kaaga uu lacag ka qaadayo
Saldhigga iXpand ee Sandisk wuxuu ku siinayaa dariiq aad u habboon oo nuqulo gurmad ah looga sameysto iPhone-kaaga inta baterigeeda uu ku shaqeynayo
Apple waxay lahaan laheyd heshiis saxiixan si ay u bilawdo soo saarista muraayadaha dhabta ah ee Augmented
Waana in wararka xanta ah ee ka hadlaya muraayadaha xaqiiqda la kordhiyay ee Apple ay had iyo jeer jireen ...
Apple wuxuu ku darayaa midabyo cusub kiisaska silikoonka ee iPhone X
Intaa waxaa dheer in ay leedahay guul weyn oo ay ku iibineyso moobilkeeda - iyada oo aan loo eegin nooca ay tahay - Apple sidoo kale waxay ku guuleysataa xoog ...
Rarista AirPods way kori doontaa sanadka soo socda
Tani waa war noogu imanaya qaab xanta KGI oo ay la socoto falanqeeyeheeda weyn Ming-Chi Kuo at ...
Volterman wuxuu soo bandhigayaa fikradda Smart Wallets
Volterman wuxuu doonayaa inuu u beddelo jeebka caadiga ah qalab casri ah oo leh nooc kasta oo tiknoolajiyad ah iyada oo aan luminin qaabka caadiga ah.
Sphero Mini, tiknoolijiyada ayaa lagu cadaadiyey ugu badnaan
Waxaan tijaabinay Sphero Mini droid, oo ah qeyb yar oo tiknoolajiyad farabadan lagu cadaadiyo, waxaana kuusoo bandhignay muuqaal ahaan si aad ugu aragto isagoo shaqeynaya.
Waa la sii wadayaa in la xaqiijiyo in boos celinta iyo iibinta iPhone X ay yihiin diiwaan
Tani wax ugub ah kuma ahan adeegsadayaasha raaca isbedelka iibka iyo boos celinta kahor ...
Soo qaado iPhone 8 oo leh qiimo dhimis dhan 150 euro mahadsanid Yoigo
Hawl wadeenka Yoigo ayaa ku soo laabtay culeyskii wuxuuna na siiyay iPhone 8 oo leh 64 GB oo keyd ah oo leh qiimo dhimis dhan 150 euro.
WonderCube Pro, furaha furaha u noqon doona saaxiibka ugu fiican iPhone-kaaga
Ma waxaad u rabtaa xargo-is-weydaarsi ballaadhan oo loogu talagalay iPhone-kaaga? WonderCube Pro waxay noqon kartaa qalab aad u xiiso badan sababo la xiriira isticmaalka badan
Tani waa sida ugu dhakhsaha badan nidaamka xukun deg deg ah ee iPhone cusub waa
Ragga ka socda Tom's Guide waxay sameeyeen isbarbar dhig kaas oo la hubinayo waqtiga lacag bixinta ee taleefannada casriga ah ee waaweyn ee suuqa yaalla
Sida loo is waafajiyo iCloud iyo kalandarka Google si fudud
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo is waafajiyo qaab fudud, iyadoo aan la adeegsan iyo bilaash, jadwalka iCloud iyo Kalandarka Google
Tile Sport, falanqaynta raadraaca aadka u adkaysta iyo xarrago leh
Waxaan eegeynaa mid ka mid ah trackers-ka sida ugufiican ee dib loogu eegay suuqa. Waa Tile Sport, oo ah qalab yar oo nooca ugu xiisaha badan leh
HEX waxay bilaabeysaa kiisaskeeda cusub ee Star Wars iPhone
Aaladda 'iPhone accessories' ee HEX waxay soo bandhigaysaa kiisaskeeda cusub ee iPhone-ka oo leh astaamaha caanka ah ee loo yaqaan 'Star Wars' oo ka samaysan maqaar
Ku dallac iPhone-kaaga iyo Apple Watch adoo adeegsanaya batarigan banaanka ah ee Xtorm
Thanks to Xtorm Apple Watch Charger, kaliya kama qaadi karno Apple Watch meelkasta oo aan dooneyno, laakiin sidoo kale waxaan ku soo oogi karnaa iPhone
Apple waxay yeelan kartaa qalab u gaar ah oo ay ku xakameyso baytariyada
Batarigu wuxuu sii ahaanayaa cidhibta weyn ee Achilles ee taleefannada casriga ah, iyo goob casriyeynta ...
Apple wuxuu mar kale faafreeyaa App Store, hadda ciyaar fiidiyoow ah
Tani waa sheekada sida kadib markii warqad ka socota urur aan macaash doon ahayn Apple ogolaatay in ciyaarta fiidiyowga laga saaro App Store.
CarPlay waxay kusii socotaa wadadeeda si ay u gaarto gawaarida badan sanadka 2018
Si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah waa wadada Apple CarPlay ay u raaceyso gawaarida aan awoodno ...
Apple wuxuu furaa qaybtiisa Isboortiga ee barnaamijka Apple TV
Iyadoo la tixgelinayo in la helo Apple TV ka wanaagsan, Apple wuxuu ku darayaa qaybta Isboortiga ee barnaamijka Apple TV si loo ururiyo dhammaan macluumaadka cayaaraha.
Funxim, oo ah saldhig ku-dallag Qi ah qalab kala duwan oo aad ugu eg Apple's AirPower
Funxim, waa mashruuc cusub oo aan ka helnay websaydhka 'Kickstarter croudfunding' oo sidaas darteed maahan wax ...
Fikrad cusub oo iPhone 8 ah oo leh «HomeBar»
Marka la wajahayo soo bandhigida taleefannada cusub ee iPhone-ka, xariifnimada ayaa had iyo jeer fiiqan waxaana la daabacayaa fursado badan oo naqshadeynta taleefanka cusub ah.
Sida loo abuuro kiiska lacag la'aanta ah ee loogu talagalay AirPods
Ma sugi karaa inta wireless-ka lacag-ku-shubida sanduuqa Airpods la iibinayo? Si fiican u samee naftaada. Halkan waxaan ku tusaynaa sida
Sidee dhakhso leh udejinta degdegga ah ee iPhones cusub?
Haddii aadan weli isku dayin inaad si deg deg ah ugu dallajiso iPhone-kaaga xeedho iyo fiilo isku habboon, qodobkan waxaan ku tusinaynaa sida dhakhsaha badan ee ay tahay
Joogitaanka Netatmo iyo Soo dhaweynta, amniga biil la'aan ama lama filaan ah
Netatmo waxay na siisaa nidaam ilaalin fiidiyow ah oo dhameystiran oo leh kaamirooyinkeeda Soo-dhaweynta iyo Joogitaanka, oo leh shaqooyin horumarsan oo aan lahayn khidmad bille ah.
Apple wuxuu ku guuleystey patent-ka kamarad TrueDepth oo aqoonsaneysa tilmaamaha gacanta
Apple waxay qaadatay patent-ka is-dhexgalka 3D kaas oo aqoonsan doona tilmaamo lagu sameeyo gacmaha si loo xakameeyo howlaha kombuyuutarka Mac.
Cyber ​​Isniinta, heshiisyada tikniyoolajiyadda ugu fiican ee Amazon
Cyber ​​Monday wuxuu la yimaadaa iib xiiso leh waxaanan soo xulnay kuwa aan isleenahay kuwa ugu xiisaha badan si aanad u dhaafin midna.
Sida loo adeegsado YouTube ahaan asalka muusikada asalka u ah iPhone
Waxaan ku bari doonnaa sida loo isticmaalo YouTube-ka asalka ah si aad u dhageysato codka xitaa haddii fiidiyowyada aan lagu ciyaarin shaashadda
Hal abuur leh Omni, oo ku hadla WiFi qiimo aad u fiican
Creative Omni waa afhayeen leh awood-bixiye dhammaad-dhammeystiran oo leh qiimo dheeri ah, iyo AirPlay oo ku habboon.
Soo hel ogeysiisyada iPhone X iyo iPhone 8 Plus si dhakhso leh
Ma rabtaa inaad si dhakhso leh u hesho ogeysiisyada iPhone X? Halkan waxaan kaaga tagnay cashar si aad uhesho hal taabasho oo aad kuhesho
Sida loo soo dejiyo sawir-qaadaha gaarka ah ee iPhone X
Sii dayn kasta oo cusub oo iPhone ah badanaa waxay la socotaa waraaqo cusub, waraaqo sawir leh oo la ...
IPhone X wuxuu horeyba uga jiraa 13 wadan oo kale
Noocii ugu dambeeyay uguna cuslaa ee taleefanka gacanta ee Apple, kacaankii iPhone X, wuxuu si rasmi ah uga degay saddex iyo toban dal oo kale Jimcihii, 24-kii.
IPhone 7 sidoo kale waa taleefanka casriga ah ee ugu iibka badan Boqortooyada Ingiriiska rubucii u dambeeyay
IPhone 7 waa kan ugu iibsiga fiican rubucii ugu dambeeyay Boqortooyada Midowday, waxaa ku xigay Galaxy S8 iyo Galaxy S8 Plus.
Laba iyo toban maqaar dabacsan oo Koonfur ah iyo joornaal, ku labistaya iPhone X maqaar
Twelve South waxay na siisaa joornaalada joornaalka iyo RelaxedLeather ee ka ilaalin doona iPhone X-ga tayada leh kaliya maqaarka na siin kara.
Ka faa'iideyso Black Friday oo waxaad ku heshaa fiiladan Qi 3.0 wireless oo keliya 15 euro
Holife waxay na siisaa xeedho bilaa wireless ah oo loogu talagalay 10w iPhone cusub oo ah kaliya 15,99 euro inta lagu jiro Jimcaha Madow
Sway, xayeysiiska cusub ee Apple ee AirPods
Ololaha Kirismaska ​​ayaa maalmo ka hor ka bilowday Apple iyo ka dib bilowgii ololaha boggeeda: «Hadiyadaha ...
Bangiga korantada ee Tesla 3.350 mAh iyo nuqul aasaasi ah oo lagu soo oogo supercharger
Dhamaanteen ama dhamaanteen waan ognahay agaasimaha guud ee Tesla Elon Musk, iyo dhamaanteen ama dhamaanteenba waan ognahay in Tesla ...
Xeedho Aukey si dhakhso ah loogu soo oogo iPhone X, 8 iyo 8 Plus
Waxaan kuu soo bandhigeynaa laba xeedho oo Aukey ah oo si dhakhso ah u buuxinaya isla jaan qaada iPhone-ka cusub iyo qiimo ka hooseeya kuwa rasmiga ah ee Apple
Sida sawirada loogu diro WhatsApp adiga oo aan tayada lumin
Xeeladan fudud waxaan ku tusi doonaa sida aad ugu diri karto sawirrada WhatsApp adiga oo aan lumin raad tayo leh.
Apple ma sameysaa qaladaad aan horeyba ugu aragnay Android?
Waxaa la joogaa waqtigii dib loo soo nooleyn lahaa aragtida muhiimka ah ... Apple miyey sameysaa qaladaad la mid ah macruufka sida Google ee leh Android?
Juuk Vitero, suunka aluminium ee Apple saxiixi doono
Juuk Vitero waa suun aluminium ah oo leh tayada ugu sareysa iyo midab la mid ah tan mugdiga Apple Watch ee kaa dhigaya inaad jacayl ku dhacdo aragtida koowaad
Sega wuxuu cusbooneysiiyaa Sonic the Hedgehog 2 Classic, oo wuxuu uga tagayaa si bilaash ah laakiin xayeysiis ah
Nooca cusub ee 4.0 ee ciyaarta Sonic the Hedgehog 2 Classic, wuxuu u yimid dadka isticmaala macruufka muhiim ...
Opera saabuun horumarinta HomePod wuxuu soo bilowday shan sano ka hor
Dib u dhaca daqiiqada ugu dambeysa ee HomePod ayaa ah mid ka mid ah dhibaatooyinka badan ee la xiriira hormarka afhayeenka Apple oo bilaabmay shan sano ka hor.
Foxconn waxay mar kale ku lug lahayd arrin dhiig-miirashada aadanaha
Maaha markii ugu horaysay ee Foxconn ay ka soo dhex muuqato warbaahinta arrimo la xiriira dhiig-miirashada dadka ama ...
Xaddidaadda Apple ee Iftiinka Sawirka
Sawirradihii hore ee kamaraddii hore ee iPhone sawir laguma xoojin karo iyadoo la adeegsanayo saamaynta iftiinka cusub ee iPhone x.
Ka saar goobta sawiradaada NoLocation, bilaash wakhti xadidan
Thanks to codsiga NoLocation, waxaan ka takhalusi karnaa iskuduwaha GPS-ka ee iPhone-keena ka diiwaan galiyo sawir kasta ama muuqaal kasta oo aan qaadno.
IPhone-ka waxaa loo caleemo saaray X inuu yahay mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan sanadka 2017
Warbaahintu waxay bilaabeysaa inay aqoonsato shaqada Apple, taa oo loo caleemo saaray iPhone X inay tahay mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee qof kasta oo adeegsade ahi yeelan karo sannadka 2017.
MacX Video Converter Pro, fiidiyowga ugu faa iidada badan ee loo beddelo macOS (Bilaash Jimcaha Madow)
Soo ogow MacX Video Converter Pro, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee fiidiyoowga u beddela Mac-ka kaas oo kuu oggolaan doona inaad dhoofiso oo aad qaabab badan u beddesho
Waxaan ku baraynaa sida loogu beddelo Animojis-ka iPhone X qaab GIF ah
Iyadoo loo marayo Workflow waxaan awood u yeelan doonnaa inaan u beddelno Animojis ee iPhone X qaab GIF ah si aan ugu dirno adduunka oo dhan dhibaato la'aan.
Sida loo rakibo emulatorka cusub ee 'iGBA 2.0 emulator' ee iphone-ka adiga oo aan JAILBILBILA
Ma rabtaa inaad ku ciyaarto Classics sida Legend of Zelda, Mario Kart ama Final Fantasy qalabkaaga? Waxaad ku samayn kartaa adoo ku rakibaya iGBA 2.0 emulator adoon JAILBILBILA
Apple waxay la shaqeysaa Intel si ay u soo saaraan modem 5G ah oo ku saabsan iPhone-ka
Apple waxay wadahadal kula jirtaa Intel si loo horumariyo jiilka soo socda ee 5G modem ee moodooyinka iPhone-ka mustaqbalka.
Sphero wuxuu soo bandhigayaa aaladihiisii ​​cajiibka ahaa ee Star Wars
Sphero wuxuu soo bandhigayaa aaladda casriga ah ee casriga ah: BB-8, R2-D2 iyo BB-9E oo leh xawaare gaaraya 7km / h iyo 30 mitir oo kala duwan
Black Friday 2017, dhammaan dalabyada laga bilaabo Noofambar 20 illaa 24 (La cusbooneysiiyay 24th)
Waxaan u soo aruurineynaa heshiisyada tikniyoolajiyadda ugu fiican isbuuca Jimcaha ee Madow ee Amazon laga bilaabo Noofambar 20 ilaa 23, 2017
Waxaan ku baraynaa inaad isticmaasho Siri adoo garaacaya halkii aad codkaaga ku isticmaali lahayd
Baro isticmaalka Siri adoo adeegsanaya kumbuyuutarka halkii aad cod ahaan ku heli lahayd, waxay kaa caawin doontaa inaad u isticmaasho daqiiqado aanad cod sare ku hadli karin.
Xisaabta Fiete - Xisaab, bilaash wakhti xadidan
Mar labaad waxaan ku laabaneynaa culeyska ciyaar, halkii codsi, in kastoo kuwa ugu yar, oo ay u socoto ...
Ku keydi batterigaaga iPhone X adoo ka joojinaya 'Press to activate'
Hawlaha firfircoonida shaashadda iPhone X iyadoon la taaban badhanka dhinaca jirka ayaa wax u dhimi kara isticmaalka batterigaaga. Waxaan ku baraynaa sida loo joojiyo
Dhamaan tabaha iPhone X si aad uga faa iideysato
IPhone X wuxuu ahaa isbedel weyn tan iyo markii Apple ay soo saartay noocii ugu horreeyay ee casriga ugu caansan ee ...
IOS 11 waxay kujirtaa shaqooyin cusub sida turjubaanka Siri oo noo ogolaanaya inaan u badalo qoraalada af ingiriisiga iyo luqado kale. Mustaqbalka waxaa jiri doona luuqado badan.
Cashar ku saabsan sida loo helo sawirro soo-gaadhis dheer leh oo leh iPhone, nooca iOS 11 iyo Saamaynta Sawirrada Tooska ah
Sawir qaade Mann Lauds wuxuu tijaabiyaa kamaradda iPhone X natiijooyinkuna waa kuwo cajiib ah
Sawir qaade Mann Lauds ayaa tijaabiyey kaamirada iPhone X wuxuuna xaqiijiyey inuu aad uga sareeyo iPhone-kii hore, natiijooyinka ayaa aad u wanaagsan.
DJI Mavic Pro Alpine White Edition drone, oo si gaar ah looga heli karo Apple Store
Daabacadda cad ee 'Alino' ee DJI Mavic Pro drone waxaa laga heli karaa oo keliya iyada oo loo marayo Apple Store khadka tooska ah iyo jir ahaanba.
Ku ilaali iPhone X-gaaga kiisaskan moobiilka ah
Waxaan falanqeyneynaa oo tijaabinaynaa iska caabinta kiisaska TENC iyo Quattro Air ee Just Mobile, oo ah laba beddelaad oo aad u fiican si loo ilaaliyo iPhone X
Belkin wuxuu bilaabayaa 36w USB-C xeedho baabuur iyadoo si dhakhso leh loogu dallacayo iPhones cusub
Belkin wuxuu soo saaray xeedho baabuur oo dhakhso leh oo awooddiisu tahay 36 wat oo qiimihiisu yahay 29 euro / dollars.
Apple waxaa lagu qiyaasaa inuu iibiyay kudhowaad 4 milyan oo Apple Watch ah rubucii lasoo dhaafay
Sida laga soo xigtay shirkadda Canalys, Apple way iibin kartaa inta lagu gudajiray rubucii ugu dambeeyay qiyaastii 3,9 milyan oo unug oo ka tirsan Apple Watch
Shirkadda Nike waxay soo bandhigeysaa Apple Watch Nike + Series 3 oo leh xarig cusub
Nike waxay sii wadaa isbahaysiga ay la leedahay alaabada Apple si ay u siiso xalal mood iyo mid isboorti orodyahanada waxayna soo bandhigtaa Apple Watch Nike + Series 3.
Apple wuxuu ku shaqeeyaa dareemayaal cusub oo 3D ah oo loogu talagalay kamaradda gadaal
Apple waxay soo saartay dareemayaal cusub oo loogu talagalay kamaradda gadaal iyada oo ujeedadu tahay in lagu daro wax soo saarka iPhones-ka 2019
IOS 11.2 waxay keeneysaa lacag-bixin deg deg ah oo loogu talagalay 7,5w xarkaha wireless
Nooca ugu dambeeyay ee iOS 11.2, oo ku jira beta, wuxuu bixiyaa taageero loogu talagalay fiilooyinka wireless-ka illaa 7,5 watts
N26, Openbank iyo Orange Cash, oo lagu kordhiyay Apple Pay ee Spain
Ku dhowaad sanad kadib markii la bilaabay Apple Pay, N26, Openbank iyo Orange Cash ayaa ku biiraya nidaamka lacag bixinta Apple
Waxay ku qiyaasaan 20 milyan oo iib ah AirPods waxayna filayaan intaas ka badan
KGI waxay ku qiyaaseysaa in Apple's AirPods ay horey u iibiyeen labaatan milyan oo unug sanadkii 2017 waxaana la filayaa inay sii wadaan sii kordheysa sanadka 2018.
Apple si ay u bixiso bandhigyo cusub oo OLED iyo LCD ah sanadka 2017
Tani waa sida ay ku dhamaanayso inay bixiso laba qaybood oo OLED ah oo kala ah 6,5 "iyo 5,8" siday u kala horreeyaan, waxaan sidoo kale yeelan doonnaa guddi FullVision laakiin markan ah 6,1 "
Xtorm Freedom oo si deg deg ah ugu amraya saldhig wireless ah, iPhone 8, 8 Plus iyo X
Xtorm Freedom waxay na siisaa saldhig lacag la'aan ah oo bilaash ah oo la jaan qaada lacagta degdegga ah ee Apple ee iPhone 8, 8 Plus iyo X
Toban horumarin oo Apple u baahan tahay inay ku darto iOS 12
Haddii iPhone X uu hoggaamin doono Apple, macruufka waa inuu ahaadaa saddex tallaabo ka hor. Halkan waxaa ah 10 siyaabood oo iOS 12 ay kubbadda u rogi karto.
FBI-da ayaa si khaldan u khaldami laheyd isku day ay ku dooneysay inay ku hesho taleefanka iPhone-ka ee geystay xasuuqii Texas
FBI-da ayaa laga yaabaa inay khalad muhiim ah gashay markii ay isku dayday inay furto taleefanka Iphone-ka ee uu adeegsaday dableygii ka dambeeyay toogashada Texas.
Apple ayaa qaawin doonta Samsung iyada oo ay ugu wacan tahay kobaca uu iPhone X siin doono
Apple waxay meesha ka qaadi doontaa Samsung oo ah shirkadda ugu weyn adduunka ee sameysa taleefannada gacanta iyada oo ay ugu wacan tahay kobaca ay ka heli doonto iibka iPhone X.
Ka faa'iideyso sida ugu badan ee qalabkaaga keydinta leh iOS 11
IOS 11 waxay la imaaneysaa maareeyaha keydinta kaas oo aan ku ogaan karno sida aan ugu adeegsano booska qalabkeena si faahfaahsan.
Isbarbardhigga batteriga ee taleefannada ugu fiican suuqa
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhigga waxqabadka batteriga ee iPhone X, Galaxy Note 8, iPhone 8 Plus iyo OnePlus 5.
Afayeenka sare ee iPhone X wuxuu soo bandhigayaa dhawaqyo kujira cufka sare
Tiro yar laakiin tirada sii kordheysa ee adeegsadayaasha ayaa la kulmaya buuq iyo guuldarooyin dhanka sare ah oo ka taagan iPhone X.
Booska ku hoos jira kumbuyuutarka iPhone X wuxuu abuuraa cabashooyin badan
Mid ka mid ah isticmaaleyaasha ugu xanaaqa badan waa booska uu taleefanka ku weydo kumbuyuutarka hoostiisa nooca ugu dambeeya ee iOS.
Labiskaaga iPhone X ku xiro kiiska maqaarka Mujjo
Kiiska maqaarka Mujjo waa, tayo ahaan iyo qiimo ahaanba, beddel fiican oo loo helo kiisaska hore ee Apple, oo lagu heli karo midabbo kala duwan.
Haddii aan ku yareyno amniga Face ID furitaanku wuu dhakhso badnaan doonaa
Aqoonsiga wajiga waa habka ugu amniga badan ee lagu furo iPhone X. Hase yeeshe, waxay leedahay tallaabooyin dheeri ah oo ka dhigi kara inay gaabis ku noqoto adeegsadaha.
Waxaan ku bilownay fikradaha: tani waa sida uu u ekaan lahaa iPhone X Plus
Fikradaha ayaa bilaabmaya tanina waxay noqoneysaa iPhone X Plus oo leh naqshad la mid ah tan hadda jirta ee iPhone X laakiin leh shaashad aad u ballaaran.
Amplifi HD, ku xalli dhibaatooyinkaaga WiFi shabakadda mesh
Amplifi HD waa nidaam Mesh habboon oo loogu talagalay kuwa u baahan inay ballaariyaan caymiska gurigooda Wi-Fi, oo leh xiriir deggan iyo qaabeyn aad u fudud.
Sida loo isticmaalo 'Ha dhibin intaad wadid' muuqaalka 'iOS 11'
IOS 11 waxay ku dartay hawl cusub: Ha dhibin intaad gaariga wado. Waxaan kuu soo bandhigeynaa talaabo talaabo ah sida loo qaabeeyo ikhtiyaarkan cusub ee iPhone-kaaga
Apple iyo Hermès si ay u bilaabaan Médor suunka Apple Watch Series 14 Nofeembar 3
Hermès waxay xarumaheeda ku darsaneysay aaladaha tan iyo bilowgii iibka smartwatch ee Apple waana run in ...
Apple waxay la wareegeysaa InVisage si loo hagaajiyo kamaradda iPhone-ka
Apple waxay heshay InVisage Technologies, shirkad ku takhasustay soo qabashada nalka iyadoo la adeegsanayo module kamarad khafiif ah.
Apple, oo gaabinaysa inay gaarto qiimo dhan tiriliyan dollar
Wall Street waxay sii saadaalinaysay in Apple ay noqonayso shirkad trillion dollar ah tan iyo 2012. Waqtigu wuxuu umuuqdaa inuu yimid.
IOS 11.2 beta, kuwani waa cayayaanka tagaya iyo kuwa yimid.
Waxaan falanqeyneynaa kuwee dhibaatooyinka Apple horay u xaliyay iyo kuwa haray, waxaan ku eegaynaa waxoogaa si qoto dheer
Sida loo arko taariikhda iibsiga ee Dukaanka App-ka iPhone ama iPad-kayga
Mid ka mid ah howlaha cusub ee ay iOS 11 na siiso waxay la xiriirtaa Taariikhda Iibsiga, taariikh aan kala tashan karno iPhone-keena
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.1.1
Apple waxay soo saartay nooc cusub oo iOS ah, gaar ahaan nooca 11.1.1 kaas oo ay ku hagaajiso cilladaha ayna hagaajiso xasiloonida guud ee nidaamka.
Apple waxay bilaabi doontaa muraayadaha dhabta ah ee Augmented ee 2020
Apple waxay lahaan doontaa muraayadaha xaqiiqda ah ee la kordhiyay ee diyaar u ah 2019 kuwaas oo suuqa ku dhufan doona 2020, oo leh nidaam hawleed u gaar ah
Dacwad cusub oo ka dhan ah Apple oo ku saabsan shatiyada. Markan, kamaradda laba-jibbaaran
Dacwad cusub oo ay Apple u heshay xadgudub sharciyeed. Markan, waa Corephotonics oo sheeganaya in shirkadda weyn ee Cupertino ay adeegsatay shatiyada.
Soo dejiso waraaqaha cusub ee iPhone X
Mana jiro wax cusub oo iPhone, iPad ama Mac ah oo aan ku darin waraaqo cusub iyo ...
Guuldarrooyin baaxad leh markii la kicinayo iPhone X cusub ee Waqooyiga Ameerika AT & T
Mareykanka gudihiisa, adeegsadayaasha iPhone X ee howlwadeenka AT&T waxay la kulmayaan dhibaatooyin dhaqaajinaya mobiladooda cusub
Miyaad seegtaa badhanka guriga? Marka waxaad abuuri kartaa mid dalwad ah
Miyaad seegtaa badhanka gurigaaga iPhone X? Uma baranaysid baarka cusub ee bilowga ah? Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo abuuro badhan farsameed.
Sida loo damiyo, dib loo bilaabo ama loo tooso iPhone X
Waxaan la laabaneynaa casharradii hadda, maanta waxaan ku tusi doonnaa jidadka loo damiyo, dib loo bilaabo ama loo kiciyo iPhone X iyadoo loo eegayo baahiyahaaga.
IPhone X waa u qurux badan yahay siduu u jilicsan yahay, sidaa darteed wuxuu iska caabiyaa naxdinta
Kuwani waa tijaabooyinkii ugu horreeyay ee iska caabinta ee iPhone X xaqiiqduna waxay tahay in dhammaantood lagu arko terminal aad u jilicsan.
Imaatinka iPhone X, qaar ka mid ah ficilada ugu caansan gudaha nidaamka deegaanka ee iOS ayaa isbedelay. Midkoodna wuxuu xidhayaa barnaamijyada.
Sida ugu dhakhsaha badan ee loogu beddelo barnaamijyada ku jira iPhone X
Sideen ugu beddelaa barnaamijyada leh iPhone X? Runta ayaa ah in Apple ay garatay sida ugu wanaagsan ee loo hirgaliyo nidaamka cusub, waan kuu sheegi doonaa.
Sida loo hubiyo boqolkiiba batroolka iPhone X dhabta ah
Waxa ugu cajiibka badan ee ku saabsan iPhone X waa ka saarista badhanka Guriga ee hoose iyo shaashadda weyn ...
Sida loo isticmaalo Aqoonsiga Face-ka ee iPhone X oo leh Apple Pay
Ma waxaad tahay mid ka mid ah kuwa ku isticmaala Apple Pay iibsigooda oo aad rabto inaad ku isticmaasho Face ID-ka iPhone X? Halkan waxaan ku tusineynaa sida loo qaabeeyo loona isticmaalo
Tile wuxuu soo bandhigayaa degsiimadiisa cusub ee ugu awoodda badan
Tile wuxuu soo bandhigayaa astaameeyaasheeda cusub oo leh kala duwanaansho ballaaran, caabbinta biyaha iyo waxyaabo badan oo iska caabiya, oo leh laba naqshadood oo kala duwan.
ShutterGrip, oo ku habboon in sawirro lagaa qaado iPhone-kaaga
Just Mobile ayaa bilawday ShutterGrip, oo ah mashruuc Kickstarter ah kaas oo ay ku doonayso inay ku soo saarto qalab siyaado ah kaas oo sahlaya sida aan sawirada ugu qaadno casriga
Tani waa mid ka mid ah su'aalahaas oo ay fududahay in laga jawaabo laakiin adeegsadayaal badani aysan ogeyn, waayo ...
Imtixaanka xawaaraha ee u dhexeeya Face Id iyo Touch ID
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan nooca nidaamka amniga ee iPhone ka dhakhso badan, qodobkan waxaan ku siineynaa macluumaad gaar ah.
Laba iyo toban Koonfurta ayaa na tusaysa kiisaskeeda cusub ee loogu talagalay iPhone X
Twelve South waxay soo bandhigeysaa kiisaskeeda cusub ee loogu talagalay iPhone X kaas oo la heli karo si loo raro wiiga soo socda.
1Password Updates oo leh waxa ku cusub iPhone X, Aqoonsiga Face-ka, iPad Drag & Drop, iyo Inbadan
Xaaladdan oo kale, nooca 7 ee 1Password wuxuu yimaaddaa saacado ka hor inta aan la soo saarin nooca cusub ee Apple, iPhone ...
HiRise Duet, waxay soo celisay saldhigii ugu fiicnaa ee iPhone iyo Apple Watch [SWEEPSTAKES]
Laba iyo tobanka koonfureed waxay na siisaa mid ka mid ah saldhigyada ugu dhameystiran suuqa si dib loogu soo celiyo Apple Watch-kaaga iyo iPhone-kaaga isla waqtigaas, oo lagu qabsado meesha ugu yar.
Nalalka casriga ah ee IKEA TRÅDFRI ayaa hadda la jaan qaadaya HomeKit
Waxaan aragnay oo kahadalnay alaabooyinka kuxiran HomeKit maalinteena maalinlaha ah waana iska cadahay tan ...
Iibiyaha Boolishka ayaa sheeganaya in AirPower lagu qiimeyn doono $ 199
Sida laga soo xigtay iibiyaha reer Poland, qiimaha saldhigga lacag la'aanta ah ee Apple, AirPower, waxaa lagu qiimeyn doonaa 199 lagu daray canshuuraha.
IPhone X lagama qaadi karo Apple Stores ee Faransiiska iyo Beljim
Sharciyada la dagaalanka argagaxisada awgood, dadka isticmaala ee iibsaday iPhone X ma awoodi doonaan inay aadaan Apple Stores si ay uga soo qaataan.
Sida loogu beddelo koontadaada Apple iCloud.com
Apple ugu dambeyntii wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto koontadaada iCloud.com iyo Aqoonsigaaga Apple. Waxaan ku sharaxeynaa sida loo sameeyo talaabo talaabo sawiro iyo cawaaqibkeeda.
Beta-ka cusub ee iOS 11.2 wuxuu noo keenayaa SiriKit-ka AppleP HomePod
Cupertino Guys waxay ku dartaa Taageero Cusub HomePod SiriKit Taageerada cusub ee iOS 11.2 Beta ee loogu talagalay horumariyeyaasha inay bilaabaan
Apple waxay qorsheyneysaa inay ka saarto dhammaan waxyaabaha Qualcomm ee iphone iyo ipad
Oo kani waa dagaal cakiran oo miiska saarnaa in muddo ah taas oo ka tagi doonta Qualcomm ...
Sida loo tirtiro farriimaha WhatsApp si uusan ridiyuhu u aqrisan karin
Kadib cusbooneysiintii ugu dambeysay, adeegga ugu caansan ee farriinta, WhatsApp, ayaa ugu dambeyntii kuu oggolaanaya inaad tirtirto farriimaha wakhti xaddidan
WhatsApp hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad tirtirto fariimaha laga soo diray iphone
Waxaan ku tusineynaa waxa ay ka kooban yihiin howlahan cusub ee WhatsApp iyo sida aad u tirtiri karto fariimaha aad horey u dirtay si aan qofna u aqrin karin.
Sideen u gab karaa Tone True ee iPhone-ka?
Waxaan rabnaa inaan kuula socodsiino sida aad barkinta uga saari kartid Tone True ee shaashadaada iPhone dhowr talaabo oo fudud, aan halkaa ugu tagno casharka.
Sida loogu wareejiyo wada sheekaysigaaga WhatsApp iPhone-kaaga cusub
Waxaan ku baraynaa sida loogu wareejiyo wada sheekaysigaaga WhatsApp-ka iPhone-kaaga cusub iyada oo loo marayo dhawr tallaabo oo fudud.
Dhibaatooyinka aad iPhone? Soo Celinta ayaa hagaajin kara
Marka nooc cusub oo macruufka ahi yimaado, macnaheedu waa imaatinka wararka laakiin sidoo kale dhibaatooyin, kuwaas oo badankood lagu tirtiro dib u soo celinta iPhone-kaaga
Sida loogu beddelo aaladaha AirPlay iOS 11
Waxaad dooneysaa inaad ogaato sida loo badalo aaladda loo maqli karo ee AirPlay oo leh iOS 11, waxaan ku bari doonaa casharka aan kuu diyaarinay.
BESTEK 220V qalabka wax lagu beddelo oo lagu daray laba dekedo oo USB ah oo loogu talagalay gaariga
Laga soo bilaabo gacanta BESTEK waxaan ku soo bandhigeynaa qalabka wax lagu beddelo ee gaariga leh laba dekedo oo USB ah iyo fiilo cajiib leh oo leh awood dhan 220V.
Dodocool xeedho desktop leh QI, mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee iPhone-kaaga cusub
Waxaan ku tijaabinay xeedhada desktop-ka cusub ee 'Dodocool' QI, xeedho cusub oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya lacag-bixinta wireless-ka ah iphone 8 iyo iPhone X.
Beddelida shaashadda iPhone X waxay ku kacaysaa 321 yuuro
Kharashka isticmaalaha lagu qasbay inuu beddelo shaashadda iPhone X wuxuu gaarayaa 321,10 euro.
eBay waxay ku soo bandhigeysaa sirdoonka macmalka ah codsigeeda
Waxaan horeyba uga hadalnay suurtagalnimada eBay inuu bilaabo isticmaalka nidaamka AI si loo hagaajiyo khibrada isticmaaleyaasheeda, way timid.
LG waxay furaysaa warshad cusub oo kamaradaha siisa Apple
Hadda LG waxay furaysaa warshad cusub oo dhismaheeda socday oo markaa ugu yaraan qancin karta baahida loo qabo kaamirooyinka uu iPhone X hadda haysto.
Waa maxay shabakadaha Mesh iyo goorma ayey u qalmaan?
Waxaan kuu sharraxeynaa waxa shabakadaha Mesh yihiin, sida ay uga duwan yihiin shabakadaha caadiga ah iyo goorta ay u qalmaan iyo marka aysan ahayn
Banco Santander wuxuu kiciyaa Apple Pay kaararka VISA-da
Kaararka Banco Santander VISA waxay u yimaadaan Apple Pay si ay ugu biiraan Mastercard iyo inaan ugu adeegsan karno lacagaha moobilka ah.
Waxaan tijaabinay xarkaha baabuurta wireless-ka ee Dodocool
Waxaan soo bandhigeynaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee lagu soo dallaco iPhone X-ga cusub ama iPhone 8, Dodocool xeedho baabuur wireless ah.
Apple waxay la wareegtay shirkadda xawilaadda wireless PowerbyProxi
Waxaa hadda la xaqiijiyay in Apple ay iibsatay shirkadda xawilaadda wireless-ka ee PowerbyProxi.
Waxaan ku maalgelin doonnaa qiyaastii € 80 sanadkii App Store ilaa 2020
Bakhaarka App-ka ee loo yaqaan 'iOS App Store' wuxuu noqday kan ugu dukaanka badan ee moobilada lagu keydsho dhawaanahan ...
Laba iyo tobanka koonfureed ee HiRise Duet Dock ayaa laga bilaabay suuqa, ka dib markii ay ku dhowaad sanad ka maqnaayeen
Ragga ka socda laba iyo tobanka koonfureed waxay mar labaad dhigayaan HiRise Duet deck mar labaad, mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga heli karo iPhone iyo Apple Watch
Zhiyun Smooth-Q, gimbal weyn oo qiimo aan caadi aheyn ku fadhiya
The Zhiyun Smooth-Q gimbal waa ikhtiyaar aad u fiican oo waxqabad iyo qiime ah si loo gaaro natiijooyin wanaagsan oo ku saabsan duubista iPhone-keena.
Saldhigga lacag bixinta Oittm ee iPhone iyo dib u eegista Apple Watch
Saldhigga lacag bixinta ee Oittm ee iPhone iyo Apple Watch waa xalka ugu fiican dhammaan kuwa doonaya inay yareeyaan booska loo baahan yahay si looga qaado.
Delta Airlines waxay beddeli doontaa oogada iyo Lumia ee iPad iyo iPhone
Khadadka duulimaadyada ee Deltra ayaa hadda ku dhawaaqay in bilowga sanadka soo socda, ay ku beddeli doonaan Surface iyo Lumia iPad iyo iPhone.
Ka waran haddii Apple ay soo saarto nooc jaban oo ah iPhone X sanadka 2018?
Waxay bilaabaysaa in la xanto in Apple ay bilaabi doonto iPhone X qiimo jaban si ay u cusboonaysiiso SE noocyada iPhone-ka oo ay siiso astaamaha iPhone X.
Sida loo sameeyo GIF-ka iPhone-ka
Waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo GIF habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan adigoon u tagin PC si aad u sameyso.
Sida looga soo kabsado wada hadalkeena WhatsApp
Ma rabtaa inaad ka soo kabato wada sheekaysiga WhatsApp? Waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo talaabo talaabo si loo soo celiyo sheekooyinkii hore
Dawladda Shiinaha ayaa qaabaynaysa marinka LTE ee Apple Watch Series 3 cusub
Waa dhibta ugu yar in la akhriyo wararka noocan ah ee ku saabsan xaddidaadda, caqabadaha, faaf-reebka, koofiyadaha iyo caqabadaha ay soo rogeen ...
UE Blast iyo Megablast, waa labada kuhadlaya ee cusub ee Ultimate Ears oo ku dar Alexa
Waxaan u baranay inaan ku aragno hadalo la qaadan karo wadada, jardiinooyinka, fagaaraha iyo meelaha kale ee wadada….
Armani Ku Xidhan, waa ikhtiyaar aad u xiiso badan haddii aad jeceshahay smartwatches oo leh qaab wareeg ah
Haddii aad ka daashay naqshadda laba jibbaaran ee Apple Watch iyo isticmaalkeeda ugu weyni tahay inaad hesho ogeysiisyo, Armani Connected wuxuu na siinayaa ikhtiyaar ku habboon
Jaybird Run, oo beddel u ah Airpods loogu talagalay cayaaraha
Jaybird Runs-ka cusubi waa bedel aad u fiican oo AirPods loogu talagalay isboortiga iyaga oo leh iska caabbinta biyaha iyo nidaamkooda dhejinta
Kooxda Apple iyo General Electric ayaa kor u qaadaya barnaamijyada 'Predix Industrial Apps' ee iPhone iyo iPad
Apple waxay sii wadaa wadashaqeynteeda iyo iibsashada shirkadaha si ay ugu daboosho inta ugu macquulsan dhammaan qeybaha. Dhowr kahor…
Tani waa sida «Hey Siri» u shaqeyso marka aynaan isticmaaleynin iPhone-keena
Apple wuxuu sharraxaad ka bixinayaa boggageeda barashada mashiinka hawlgalka dhabta ah ee iPhone-keena markaan maqalno ereyada Hey Siri si loogu yeero kaaliyaha dalwaddii
Xakamee amniga iyo asturnaanta iPhone-kaaga Bitdefender
Haddii aad ka walaacsan tahay amnigaaga iyo asturnaantaada, Bitdefender Mobile Security ee macruufka ayaa ah dhammaystirka saxda ah iyo beddelka iCloud ee iPhone-kaaga iyo iPad-ka.
ITunes U Uruurinta Waxaa loo wareejiyay App-ka Podcast App
Apple waxay ka guureysaa koorsooyinka iTunes U ilaa barnaamijka Podcast si ay isugu dayaan inay mideeyaan dhammaan adeegyadooda isla barnaamijka.
Nooca labaad ee shumaca udgoon ayaa ka yimid Mac oo ka yimid laba iyo toban Koonfurta
Waana inaan wajaheyno badeecad aan ku aragnay suuqa sanad ka hor waxayna umuuqataa inay iyadu u shaqeysay ...
Sphero Mini, aaladaha lagu barto barnaamijka markay ciyaarayaan
Sphero Mini waa aalado yar oo aad ku ciyaari karto kuna maamuli karto adiga oo isticmaalaya iPhone-kaaga iyo sidoo kale barashada barnaamijka
Hadalka Bose SoundLink Micro ayaa hadda laga heli karaa Apple Stores
Afhayeenka cusub ee Bose, SoundLink Micro, wuxuu durbaba bilaabay inuu yimaado Apple Stores adduunka oo dhan, waa naxdin u adkaysta oo ku hadla biyaha hoostooda.
CarPlay waa "waa inuu leeyahay" qof kasta oo adeegsada iPhone-ka
Daraasad ayaa muujineysa in haysashada baabuur wadata CarPlay ay tahay inay u lahaadaan dhammaan dadka isticmaala iPhone.
Jilicsanaanta laga helay borotokoolka amniga WPA2 WiFi
Qofna ama waxba kama badbaadin khaladaadka ama nuglaanta kiiskan waxaan wajaheynaa mid muhiim ah waana ...
Devolo Gigagate, buundo WiFi ah oo ilaa 2 Gbit / s ah dhammaan qalabka guriga [Dib u eegis]
Waxaan wajaheynaa buundo xawaare sare Wi-Fi loogu talagalay gudbinta ugu badan ee internetka ee dhammaan qalabka warbaahinta ...
Yale waxay soo saareysaa qufullo casri ah oo casri ah oo la jaan qaadi kara Apple's HomeKit
Astaamaha qufulka smart Yale ayaa soo saaraya qalab lagu qalabeeyo qufulkiisa AppleK HomeKit oo xitaa ka sii caqli badan.
Dhibaatooyinka ogeysiisyada WhatsApp waxay ku sii socdaan iOS 11
Isticmaalayaal badan ayaa dalbanaya dhibaatooyin markii ay ku helayaan ogeysiisyada iPhone-ka iyada oo loo marayo codsiga WhatsApp.
Waxaan arki doonaa iPhone-ka oo wata qalinka Apple 2019-ka marka ugu horreysa
Haa, Apple waxay ka shaqeyneysaa sameynta Qalinka Apple oo la jaan qaadi kara iPhone-ka, laakiin horumarkan tikniyoolajiyadeed wuxuu nagu qaadan doonaa illaa 2019.
IOS 11.0.3 wali waa waddo dheer oo ka socota hagaajinta dhibaatooyinka batteriga ee iPhone
Ku dhowaad dhammaan dadka isticmaala waxay isku raacsan yihiin in waxqabadka batteriga uu ka fog yahay waxaad ka filan lahayd nooca saddexaad ee iOS 11.
Sida loo dhagaysto muusikada bilaashka ah ee Telegram-ka ah ee ku jira iPhone-kaaga
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida aad ugu raaxeysan karto dhammaan muusikada aad rabto iyada oo loo marayo Telegram iyada oo aan la helin dhibaatooyin badan oo gebi ahaanba bilaash ah.
Hal abuur Muvo 2c, mini laakiin cagajugleyn ah
Hal-abuurnimadu waxay na siineysaa Muvo 2c afhayeen yar oo leh cod wanaagsan iyo qeexitaanno aan aad ugu badnayn qaybtaan. Adiga ayaa noqon kara
Sida looga joojiyo rukunkaaga iPhone, iPad ama iTunes
Waxaan ku tusineynaa cashar yar oo aad ku kansal gareyso rukumashadaas barnaamijyada leh adeegyada Freemium ee ka socda iPhone-kaaga ama iPad-ka iyo iTunes.
Mashiinka xayeysiinta ee Apple ayaa ka bilaabmaya, iPhone X oo ku dhejinaya boorarka waaweyn
Tani waa wax sida caadiga ah dhaca maalmo ka hor inta aan lagu dhawaaqin Apple waana in magaalooyinka qaarkood ay jecel yihiin ...
Jony Ive wuxuu leeyahay naqshadda iPhone X waxay qaadatay in ka badan laba sano in la horumariyo
hone Shaki la'aan iPhone X cusub ayaa leh dhammaan waraaqaha codbixinta si loo helo niche muhiim u ah ...
Apple Pay waxaa laga heli karaa 5.000 + Wells Fargo ATMs
Wells Fargo ayaa hadda ku dhawaaqay in tirada ATM-yada loo qaybiyo Maraykanka oo dhan isla markaana la jaan qaadaya Apple Pay ay gaarayaan 5.000
Amazon waxay soo saareysaa qalabkeeda iPhone-ka ee ku shaqeeya amarka iyo adabtarada dhagaha
Shirkadda dhoolla caddeynta ayaa hadda soo saartay adabtarad kuu oggolaaneysa inaad ka qaadatid iPhone-ka isla markaana aad isla xilliyadaas aad u isweydaarsatid dhagaha
Canary Flex, kamarad wireless ah oo gudaha iyo dibedda ah
Kaamirada Canary Flex waxay bixisaa iska caabin ku timaada cunsurrada iyo batteri isku dhafan oo u oggolaanaya meeleyntiisa gudaha iyo dibedda guriga.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.1 Beta 2 ee loogu talagalay Soo-saareyaasha iyo Beta Dadweynaha
Apple wuxuu bilaabayaa Beta labaad ee iOS 11.1 oo leh astaamo cusub sida emoji cusub iyo hagaajinta kale ee waxqabadka iyo xasiloonida qalabkeeda.
Apple waxay u dabaaldegtaa Toddobaadka Xeerka EU-da iyadoo leh barnaamijyo bilaash ah
Ragga ka socda Cupertino waxay ku sii wadaan fikradda ah barista barnaamijyada qof kasta oo doonaya inuu barto waana ...
Sida loo sii daayo booska iPhone-ka iyada oo si toos ah loo tirtiro codsiyada leh iOS 11
Thanks to shaqada cusub ee laga heli karo macruufka 11, waxaan heli karnaa meel dheeri ah inta nidaamka uu ka taxadarayo inuu si otomaatig ah u tirtiro barnaamijyada.